ट्यागनग्राफमा होटल मूल्यहरू होटल मूल्यहरू
गोल्डन बीच - परम्परागत रिसोर्ट होटल
"एलिडिरिडा" - समुद्री किनारमा आराम गर्ने होटल
Taganrog को बारेमा
स्टोन सीढी: एक पहेली प्रोजेक्ट
पानी पार्क "Azere" - शहर मा सबै भन्दा राम्रो मनोरन्जन
हो, छ कि कर्सेस्टस्ट बैंकमा अवस्थित छ, जहाँ केन्द्रीय जिल्ला बन्यो। घर रुनको सडकको सुरुमा उभिन्छ। स्थानीय कोठाको बालकजबाट एक अन्तहीन पानी सतहको उल्लेखनीय दृश्य छ। Penckin तटबन्ध को एक खण्ड पनि देखिन्छ - समुद्र तट र बरु ठूलो हरित क्षेत्र संग।
"को अर्थव्यवस्था" को "काठको" स्थापना, "मानक" (परिवार ")," उच्च "र स्टुडियो। दुई अन्तिम कोटी अपार्टमेन्टको अंश समुद्रमा जान्छ। थप रूपमा, तिनीहरूसँग थप फर्निचर, विभाजन र टेरेसहरू छन्। कोठाको अवधारणाको अवधारणा "फिनिश" हो। कार्पेट - कलाकार अन्तर्गत - ब्राउन शेडहरू। भित्तामा त्यहाँ सजाइएको तत्वहरू र scons छन्।
आवास यस संस्थालाई "सबै समावेशी" प्रकारलाई जनाउँछ - तपाईंलाई होटल रेस्टुरेन्टमा तीन पटक खाना प्रदान गरिनेछ (रूसी र युरोपियन भाँडो)। समुद्री किनारमा होटलको क्षेत्र हो:
<< p / अलग प्रकाशको लागि युरोपियन कुसुनीहरूसँग बुफे प्रणालीमा काम गर्न ठूलो रेस्टुरेन्ट जटिल आवश्यक छ।
सबै जो ट्यागन्रोज को मध्य क्षेत्रमा आराम गरीएको छ, लेनबाट तस्वीर याद राख्नुहोस् - फल्याक तटबन्धको मुख्य भागमा (उच्च किनारमा)। समुद्रबाट टाढा जानु भयो र रेलवे क्यानभास र रोडवे सारिएर, तपाईं गोल्डेन समुद्री तटमा हिम्मत गर्नुहुन्छ। उहाँ एक नयाँ 2-मदिरा रातो ईंट हवेलीमा अवस्थित एक सुन्दर होटल हुनुहुन्छ।
1 cours कोठा कोटी "मानक" को हो। परिसरको डिजाईन "एलिट" को शैलीमा डिजाइन गरिएको हो। हालसालै मर्मत गरियो। यहाँ सुन्तनलाई महँगो छ। प्रत्येक शान्तिको आफ्नै र color ्ग, संलग्न फर्नीचरको धेरै वस्तुहरू, साथै नि: शुल्क वाइफाइज पनि।
लगभग समुद्री सतहमा ट्यागन्रोज होटेलमा दुई मिनेटको साथ आफ्नै रेस्टुरेन्ट छ। यहाँ हरेक बिहान हामी पाहुनाहरूको लागि डेस्क सेवा गर्छौं - एक नि: शुल्क "कन्टेन्टिवल" ब्रेकफास्ट प्रस्तुत गरिएको छ। आँगन भित्र यो पार्किंग स्थल र लुगा धुने कोठा पत्ता लगाउन सजिलो छ। लबीमा एक फिल्म छ। यहाँबाट तपाईं ट्याक्सी पनि स्टेशन वा एयरपोर्टमा बुक गर्न सक्नुहुन्छ।
शहर Azov समुद्रको किनारमा फैलिएको छ। / LI>
ROSTOV-AS-To 40 किलोमिटर भन्दा बढि जानको लागि। / LI>
यहाँ VI-Vii शताब्दी बीसीमा यहाँ पहिलो बस्तीहरू देखा पर्यो।dआज त्यहाँ आवासीय भवनहरू, क्याफे र ट्याग्रोवका होफेरोजहरू छन्, मानिसहरू22600 भन्दा बढी वर्ष पहिले बाँचे। /
शहर नियमित योजनामा ​​निर्माण गरिएको थियो, जुन पीटर म द्वारा स्वीकृत भयो। यो मिति जुन शहरको दिन मानिन्छ। / LI>
लिनुपर्ने कति पैसा, ट्यागन्रोजमा के होटल धेरै आरामदायक र सस्तो हुन्छ? होटेलको बुकिंग सेवाको ग्रह प्रयोग गरेर तपाईं अहिलेको बारेमा जान्नुहुनेछ। जीवनको लागत होटलको स्थिति र स्थानमा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, होटल मा "बस्ने अदालत" * * सब भन्दा सजिलो संख्या 1200 रूबल को लागी हटाउन सकिन्छ। तपाईं जीविकान तटबन्धबाट ठूलो विन्डोज र टिभीको साथ पुटकिन तटबन्धबाट 1 1300 मिटरहरू बाँच्नेछ। ठीक क्याफे-बारमा तपाईं खाजा अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ र स्वाद स्वादिष्ट राष्ट्रिय खाना। ट्रेन स्टेशन र km किलोमिटर।
<< p> Tagango मा सबै होटलहरू परम्परागत छन्, "Weavesti" को अपवाद बाहेक। उहाँसँग अर्को नाम पनि छ - बुटिक होटल। हरेक दिन, रविचारिक लोबी बारले स्वादिष्ट खाजामा पुर्याउँछ, र कोठाहरू क्लासिक शैलीमा प्रस्तुत गरिन्छ। एयर कन्डिशनरहरू जताततै छन्, त्यसैले गर्मीमा तपाईं कोठामा कूरको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। Hairderyery, चप्पल उपलब्ध छ, खुट्टा मा minutes मिनेट को एक रकमको दरबारमा।
समुद्री तटमा विकास गरिएको पूर्वाधारलाई धन्यवाद, पानीको समय विविध र रमाईलो खर्च गर्न सकिन्छ। हल्का स्नैक्स र पेयहरू किनारमा बाँचिन्छ, बच्चाहरूको लागि केही आकर्षणहरू छन्। तपाईं क्याटमेन भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ। ट्यागनग्रामा होटल, अग्रिम राम्रो छ किनकि तिनीहरू लगभग कहिले पनि खाली हुँदैनन्, विशेष गरी गर्मीमा।
शहरको एयरपोर्ट दोस्रो ठूलो मानिन्छ, यदि हामी रूसको दक्षिणको बारेमा कुरा गर्छौं। ऊ कुनै पनि प्रकारको उडानहरू प्राप्त गर्न सक्षम छ। तपाईं ट्रेन द्वारा दक्षिणी शहरमा पुग्न सक्नुहुन्छ। रेलवेले रोस्टोभ-इन-डन र केही युक्रेनियन शहरहरूसँग ट्यागनग्राओप्रोलाई सम्बद्ध गर्दछ। M23 (E58) मार्गले मारिपालसँग यो दक्षिणी शहरलाई जोड दिन्छ। रसियाका सबै बुँदाहरूबाट मुख्य वा उपनगरी ट्रेन स्टेशनहरूमा बसहरू आउँछन्, त्यसैले तपाईंलाई त्यस अंशको साथ समस्या हुनेछैन।
होटेलको हाम्रो अनलाइन बुनिंग सेवा ग्रह प्रयोग गरेर, तपाईं साच्चै र सुरक्षित ट्यागनगण होटलमा एक कोठा र पुस्तकको कोठा फेला पार्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको आवासको विकल्प उत्तम छुट्टीको लागि फेला पार्नुहोस्!
लाइब्रेरी ग्लेबको साथ आराम गर्नुहोस् ताकि तपाईंको छुट्टी चम्किलो प्रभावहरू र समीक्षाहरू, फोटोहरू र भिडियो रेकर्डिंगहरू, सकारात्मक भावनाहरू र रमाईलो सम्झनाहरू भर्नुहोस्। बाइबली ग्लोब - विश्वव्यापी कुनै पनि यात्रामा व्यक्तिगत मार्गनिर्देशन!
taganrog धेरै तरीकाले प्रस्तुत गरिएको छ (यसमा कुनै आश्चर्य छैन कि उनको संस्थापक महान् रूपमा सम्राट आर्मर हो)। यो खुला समुद्री तटमा यो पहिलो रूसी पोर्ट हो, देशको पहिलो रूसी आधार र रूसमा पहिलो शहर, नियमित योजनाको आधारमा निर्माण गरियो।
आदिवासी रूसी जनसंख्याको बारेमा थप सय राष्ट्रसूद यहाँ बस्छन्। सहरको आरोपमा चिनारीहरूको यस्तो अद्भुत मिक्सर र धर्महरूले मार्क छोड्न सक्दैन। Taganrogry प्रभावशाली र प्रशंसा गर्ने आकर्षण; आश्चर्यचकित र तपाइँ सोच्न को लागी। चाखलाग्दो वास्तुकलाज र ईतिहासको प्रेमले पक्कै पनि आफैंलाई धेरै जिज्ञासु महसुस गर्दछ।
यदि तपाइँ सीढीको शीर्षमा हेर्नुभयो भने, उनीहरूको चौडाई उस्तै देखिन्छ, र यदि तपाईं आधारमा उठ्नुभयो भने - मेरो आँखामा छिटो छ सीढी कडा संकुचित छ। आर्किटेक्टको यो मूल दृश्य पछि संसारको विभिन्न शहरहरूमा भ the ्याएको निर्माणमा बारम्बार प्रयोग गरिएको थियो।
वस्तु 1 th औं शताब्दीको सुरूमा निर्माण गरिएको थियो र 1 185555555 मा, ढु stone ्गाको सिभिलहरूमा भएको सबैभन्दा उज्यालो लडाईहरू मध्ये एकमा उडाएको छ र शहरमा पाउनुहोस् र डन क्लोस्कहरू शीर्ष खोलिएको आगोमा र दुश्मनलाई रोक्न सक्छ। आज सीढी ट्यागन्रोजरको प्रतीक हो। उनी दुबै पक्षमा छानिइन्, सुन्दर मूर्तिहरू स्थापना गरियो। प्रत्येक वर्ष शहरको दिनमा पाइलाको चरणमा ठूलो दौड छ। विजेता मिल्दैन।
शहर को सब भन्दा पुरानो तटौती कहिल्यै अप्रिय छैन: पाहुनाहरू यहाँ हिंडिरहेका छन्, तिनीहरूले बच्चाहरूको परिवारहरूको लागि एक प्रयोजन बनाउँछन्, पेन्सन तटबन्धको मुख्य सजावट Taganrog को 300-वर्ष पुरानो वार्षिकोत्सवको सम्मानमा स्थापित छ।
हिंड्ने मार्गहरू मारिएका मार्गहरू बिभिन्न दिशामा, वर्ग बनाइरहेका छन्। वाटरफ्रन्ट लम्बाई किलोमिटर भन्दा बढी हो, सम्पूर्ण लम्बाईमा यो फूलको ओछ्यानहरू, हरियो बगैंचा, सफा जीवित हजुरहरू हो। साना रेस्टुरेन्ट र आकाशका कागजहरूको ढोकाहरू सँधै पाहुनाहरूका लागि खुला हुन्छन्।
यो यहाँ र वयस्कहरू र बच्चाहरू र बच्चाहरू रोचक हुनेछ। पानी पार्क को लागी एक सक्षमतापूर्वक सोचेको सजावट द्वारा विशेषता र विभिन्न सवारीहरूको इष्टतम सेट।